जॉर्डनको खजाना पेट्रा कसरी भेट्ने यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | मार्गदर्शकहरू, जोर्डन
निस्सन्देह को परिदृश्य पेट्रा के तिमी उसलाई चिन्छौ? यो छ जोर्डन पोस्टकार्ड तर यो धेरै हलिउड चलचित्रहरूमा देखा पर्‍यो। यो लगभग विगतको ढोका जस्तै छ, रहस्यको लागि, पुरानोको लागि। सत्य यो हो कि तपाईं जोर्डनको यात्राको योजना बनाउन सक्नुहुन्न जुन यस सुन्दर ठाउँको भ्रमण नगरीकन भएको छ जुन सम्मानको छ १ 1985 XNUMX पछि विश्व विरासत.
त्यहाँ मात्र हिंडेर एक जनाले पुष्टि गर्न सक्दछ कि त्यो शीर्षक धुलोको प्रत्येक झुण्डका लागि मान्य छ, प्रत्येक चट्टान, स्तम्भ, मन्दिर र कला समय बितिसके पछि पनि हाम्रो दृष्टिमा छोडिन्छ, त्यसैले यहाँ उत्तम छ। व्यावहारिक जानकारी पेट्रा भ्रमण गर्न।
2 कसरी पेट्रा भ्रमण गर्ने
3 पेट्रा पुरातात्विक पार्क
यो शहर यो हजारौं वर्ष पहिले नाबातियन राज्यको राजधानी हुन्थ्यो, एक राज्य कि रोमन साम्राज्यमा समाहित भएको थियो यसले शहरलाई बढ्नको लागि ध्यान पुर्‍यायो एक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्रमा परिणत नगरेसम्म। एक भयंकर भूकम्पले पनि पीडित, यो समय र अन्तिम सलादिनको समयमा मात्र टिक्न सफल भयो। ११०० को अन्त्यतिर, यो मरुभूमिको हातमा छोडियो र बिर्सियो.
पुरानो संसारको धेरै खजाना जस्तै १ th औं शताब्दीमा फेरि प्रकाशमा आयो यूरोपीयन अन्वेषकहरूको हातबाट, यस अवस्थामा बुर्खार्ड नामको स्वीसको हातबाट। यो उनको समीक्षा हो कि अन्य अन्वेषकहरु लाई आकर्षित जो राम्रो परिणामहरु सिर्जना जो एक भन्दा बढी शौकिया पुरातत्वविद् संग प्रेम मा पक्कै छ। जे होस्, यो १ 20 २० को दशकमा पहिलो व्यावसायिक खुदाई भयो।
आज पेट्रा जोर्डन राज्यको सबैभन्दा मूल्यवान खजाना मध्ये एक हो र साथै यो विश्व सम्पदा स्थलको रूपमा पनि छ यो पनि विश्वको नयाँ सात आश्चर्यहरु मध्ये एक हो।
कसरी पेट्रा भ्रमण गर्ने
त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, यो सबै तपाइँको सुरूवात बिन्दुमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाई अम्मानमा हुनुहुन्छ भने, जोर्डनको राजधानी, त्यहाँ धेरै बस छन् जो बिहान :6: .० देखि प्रस्थान गर्दछ र बिहान १०::30० तिर खंडहरमा आइपुग्छ। तिनीहरू कम्पनीबाट हुन् JET बस। फिर्ती यात्रा साँझ5बजे सुरु हुन्छ र टिकटको लागि जेडी १० प्रति लेग लाग्छ। यसको फ्लीट आधुनिक कारबाट बनेको छ, कुल २००, र यसले देशभरि अन्य धेरै यात्रा गर्दछ।
तपाईं पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वाडी मुसा जाने सार्वजनिक मिनी बसहरू मुजामा जानोबी स्टेशनबाट प्रस्थान गर्दै। यात्राहरू बिहान9देखि अपराह्न from सम्ममा छन्, जबकि विपरित तिनीहरू बिहान4बजे सुरु हुन्छ र अन्तिम सेवा दिउँसो १ बजे हुन्छ। यो सस्तो विकल्प हो ठीक छ, यो आधा लागत। ¿तपाईं सक्नुहुन्छ ट्याक्सी लिउ? हो, दुबै अम्मान र क्वीन आलिया एयरपोर्टबाट र मूल्य 90 ० जेडी छ यदि तपाईं कारबाट जानुहुन्छ र १ 130० यदि तपाईं जानुहुन्छ भने वैन, सम्पूर्ण वाहन को लागी प्रति व्यक्ति छैन।
सार्वजनिक मिनी बसहरूले अकाबालाई वाडी मुसासँग जोड्दछन् दुबै शहरहरु का पुलिस स्टेशनहरु बीच एक यात्रा बनाउने। त्यहाँ एक दिन मा पाँच सेवाहरु छन् र यो शुक्रवार काम गर्दैन। पहिलो बिहान6बजेतिर छोडिन्छ र भरिए पछि जान्छ। यात्रामा एक घण्टा र आधा, दुई घण्टा लाग्छs र तपाईंले ticket र J JD बीचको टिकट गणना गर्नु पर्छ। अन्तत: तपाई ट्याक्सी पनि लिन सक्नुहुन्छ, सेतो ट्याक्सी जुन पुलिस स्टेशनबाट छुट्छ। तिनीहरू J5JD वरिपरि छन् तर यसले चार व्यक्ति लिन सक्दछ। त्यहाँ हरियो ट्याक्सीहरू पनि छन्, यिनीहरूले तपाईंलाई इजरायलको सीमामा लैजान्छन्, करीव J ० जनाको लागि।
वाडी रम वा मडाबा जस्ता शहरहरूबाट तपाईं पनि पेट्रा जान सक्नुहुन्छ। बिहान6देखि बसमा। वादी रम आगन्तुक केन्द्रमा यात्रुहरू लिनुहोस्, रम गाउँमा रोक्नुहोस् र बिहान :8: .० बजे पेट्रा आइपुग्नुहोस्। यसको लागत or वा J JD छ। त्यहाँ ट्याक्सीहरू पनि छन्। र उही उही यदि तपाईं मडाबामा सम्मिलित हुन चाहनुहुन्छ भने।
यो यात्रा विशेष रूपमा सुन्दर छ किनकि पर्यटक बस किंग राजमार्गमा यात्रा गर्दछ जुन धेरै सुन्दर छ, यति धेरै वाडी मुजीबमा फोटो स्टप समेत छ र अर्को करक महलमा वादी मुसामा3बजे आउनु भन्दा एक घण्टा अघि। बेलुका। बजे। अवश्य पनि, तपाईं यो सेवा मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं होटल मरियममा रहनुभयो भने, अन्य होटलहरूले यस्तै सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछन्। पत्ता लगाउनू।
साथै पूर्वी इजरायलबाट पेट्राको लागि यात्राहरू छन्। इजरायल र जोर्डन बीच तीन सीमा पोष्टहरू छन्: एलेन्बी ब्रिज, एलाट र बिट श्यान। पहिले यरूशलेमले अम्मानलाई जोड्छ तर तपाईंसँग पहिले नै जोर्डियन भिसा प्रक्रिया गरिएको हुनुपर्दछ। क्रसिंग जटिल छैन तर यसले लामो समय लिन्छ त्यसैले यो सबै तपाईंसँग भएको समयमा निर्भर गर्दछ। तपाई अझ महँगो तर राम्रो तेल लगाएर यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ।
पेट्रा पुरातात्विक पार्क
यो धेरै ठूलो साइट हो र तपाईं यसलाई सहजै अन्वेषण गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि स्थानीय व्यक्ति आफैंलाई प्रायः गाईडको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यद्यपि त्यहाँ केही मानिसहरु छन् जुन चार वा पाँच दिन सम्म एक पूर्ण जाँच गर्न सिफारिश गर्दछन्। धेरै उत्साहित बिना, म भन्नेछु कि दुई वा तीन पर्याप्त छ। एक दिनले तपाईंलाई थकित तुल्याउँछ र यस्तो भावनामा कि तपाईंले केहि यात्रा गर्नुभएको छैन। दुई पूर्ण दिनको साथ पर्याप्त छ.
वादी मुसा पार्कको बाहिरी भागमा आधुनिक शहर होआजकल करीव thousand० हजार बासिन्दाहरूको। यो पर्यटन एजेन्सीहरूले भरिएको छ, केसमा तपाईले भ्रमणका लागि साईन अप गर्न चाहानुहुन्छ र होटल र अन्य आवास। यो मित्रवत व्यक्तिहरूको साथ एक सुरक्षित शहर हो र तपाईं यहाँ वा पार्कको नजिक रहन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने। यदि हो भने, तपाईं भग्नावशेषमा पनि हिंड्न सक्नुहुन्छ, अन्यथा तपाईं सँधै ट्याक्सी लिन सक्नुहुन्छ। पार्कको छेउमा पार्कि lot्ग स्थल छ र अम्मान वा अकबा सम्म बस स्टप।
टिकट सस्तो छैन तर तपाईले अधिक समय परिभ्रमण गर्न समर्पण गर्नुभयो। जोर्डनमा कम्तिमा एक रात बिताउनेहरूको लागि एकदिवसीय टिकट J० जेडी, दुई दिन 50 the र तीन-दिन 55० जेडीको लागत छ यदि तपाईं पेट्रा भेट गर्नुहुन्छ भने सीमा पार गर्ने बित्तिकै यो 60 ०, and० र J० जेडी हुन्छ। क्रमशः यदि तपाईं पनि रातको लागि बस्नुभयो र दोस्रो दिन खण्डहरूमा फर्कनुभयो भने, तपाईंले J० JD को फिर्ती पाउनुहुनेछ।
यदि तपाईं रात बस्नुहुन्न भने भर्ना 90 JD हुन्छ। टिकट खरीद गर्दा तपाईंले पासपोर्ट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यो भिजिटर सेन्टरमा खरिद गरिएको छ अघि वा जब तपाईं भ्रमण गर्नुहुन्छ र तपाईं सक्नुहुन्छ मा तिर्नुहोस् नगद वा क्रेडिट कार्ड। उनीहरूले प्रस्ताव गरे तीन दर्शनीय भ्रमण:
क्यामिनो प्रिन्सिपल, kilometers किलोमिटर यात्रा गर्दछ र J० JD लागत।
मेन रोड + बलिदान स्मारक, km किमि दौडन्छ
मुख्य सडक + मठ, km किमि दौडन्छ।
तपाईं यी भ्रमणहरू आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ र केही अन्यहरू यस नोभेम्बरमा प्रकाशित हुनेछन्। त्यहाँ कार टुरहरू पनि छन्: त्यहाँ दुई छन्, एउटा ट्रेजर सेन्टरलाई ट्रेजरी (राउन्ड ट्रिप), km किमी), २० JD सँग जोड्छ; र अर्को केन्द्र the० JD का लागि संग्रहालय (राउन्ड ट्रिप, km किमी) संग जोड्दछ। तिनीहरू दुई व्यक्तिको लागि कार हुन्।
मूलतः पेट्राको भ्रमणलाई छोड्नु सकिदैन: बाब अल सिक, बाँध, सिक, तथाकथित ट्रेजरी वा अल खजाना (शहरको प्रसिद्ध हुलाक अनुहार), अन्य अनुहारहरू, जुन सडकको एक छेउमा अवस्थित छ, थिएटर, रेशम मकबरा, अर्न मकबरा, दरबारको मकबरा, कोरिन्थियन टम्ब, रोमन कब्रिस्तान, स्तम्भहरूको सडक ,,, ग्रेट मन्दिर, पेट्राको मुख्य चर्च, पखेटा सिंहहरूको मन्दिर, बलिदान साइट, मकबरा। रोमन सैनिक, मठ ...
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » मार्गदर्शकहरू » जॉर्डनको खजाना पेट्रा कसरी जाने
म्यूनिखमा हेर्नका लागि चीजहरू
रोममा रमाईलो गर्न free निःशुल्क चीजहरू